पोखरा-२१ काण्ड : कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? महानगरको हातमा – Tandav News
पोखरा-२१ काण्ड : कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? महानगरको हातमा
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७७ श्रावण २८ गते बुधबार १७:५८ मा प्रकाशित
बाटो समितिको फाइल अघि बढाउन पैसाको बार्गेनिङपछि समिति अध्यक्षलाई धम्की दिएका पोखरा–२१ का वडासदस्य रामबहादुर गुरुङमाथी पोखरा महानगरपालिकाले छानविन गर्ने भएको छ ।
वडासदस्य गुरुङले बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि वाटो समितिका अध्यक्षलाई धम्काएको अडियो ताण्डव न्यूजले शनिबार समचारसहित सार्वजनिक गरेको थियो । घटना सार्वजनिक भएपछि वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले वडामा आइतबार बैठकको लागि पत्रचार गरे । सोमबार बैठक बसे तर सदस्यलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय आएन । परिस्थितीलाई हेर्दै बैठकले घटनाबारे छानविन गरि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन पोखरा महानगरपालिकालाई मंगलबार पत्रचार गर्यो ।
सोही अनुसार महानगरले आज (बुधबार) ३ सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ । समितिले घटनाको बारेमा बुझेर १५ दिन भित्र घटनाको सत्य तथ्य पेश गरेपछि मात्र कारवाही हुने कि नहुने महानगरले बतायो ।
छानविनको लागि महानगरमा पत्र पठाएको वडाध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘मैले बैठक बलाएर कुरा पनि गरे,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्षसँग सदस्यलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार रहदैन, अब घटना बारे जे महानगरले गर्छ त्यो नै अन्तिम निर्णय हो ।’
पोखरा-२१ काण्ड : ‘निस्पक्ष छानविन हुन्छ’